သတင်း – Page 43 – Welovecele
ကလေးအမည်နှင့် မိသားစု အချက်အလက်များ ထုတ်ဖော်ခဲ့သူများကို တရားစွဲဆိုသည့် လုပ်ငန်းစဉ် မတ် လ ဒုတိယပတ်အတွင်း စတင်မည်
by Admins March 11, 2020 March 11, 2020
နေပြည်တော်မှ ဗစ်တိုရီးယားအမှုတွင် ဗစ်တိုးရီးယား၏ အမည်နှင့် မိသားစု အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ သူတို့ အား တရားစွဲဆိုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မတ်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်း ဦးက ပြောသည်။ မတ်လ ၁၀ ရက်က သတင်းဌာန၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ၎င်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း …
နှီးဘုရားကြီး ပင့်လာချိန်မှာ လမ်းဘေးချပေမယ့် မြင်အပ်မမြင်အပ်တာတွေ တွန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခု
by Admins March 9, 2020
နှီးဘုရားကြီးကို ပင့်ဆောင်ပူဇော်မှု လုပ်လာစဉ်မှာပဲ လမ်းမှာ တွဲကားနဲ့ မလွတ်လို့ လမ်းဘေးကို ဆွဲချပေမယ့် ရှေ့ဘီးတစ်ခုပဲ ချိုင့်ထဲကျပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြန်လည်တွန်းတင်လိုက်သလို ခံစားတွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Sai Kyaw zTai ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပိုင်ရှင်က မျှဝေထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ထူးဆန်းတဲ့ လက်ပုံစံကြီးတွေလည်း ကားမှာ …
“မြိုင်ကြီးငူ စစ်ရှောင်စခန်းက ချစ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ ကြေကွဲစရာ အဖြစ်အပျက်”
မြိုင်ကြီးငူ စစ်ရှောင်စခန်းကနော်ဝါး(18-နှစ်) ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက် မနေ့က စတုဒီသာအတွက် တို့စရာသွားယူရင်းဆိုင်ကယ်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာဦးခေါင်းအနောက်စေ့ကွဲပီးသတိလစ်သွားလို့ မြိုင်ကြီးငူတိုက်နယ်ဆေးရုံကနေဘားအံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုလွဲပြောင်းရတယ် အဲ့ဒါ ရဲစ်တို့ဆေးရုံကAmbulance ကားကလဲပျက်စီးနေတော့ အနော်ကားနဲ့ဘားအံဆေးရုံကိုသယ်လာခဲ့တယ်။ အခုနော်ဝါးလေး CTဓာတ်မှန်ရိုက်မလို့လုပ်နေတုန်းမှာ တိမ်းပါးသွားခဲ့တယ်(ပြောရင်းနဲ့ငိုသံပါလျက်,အနော်ရင်ထဲဘယ်လောက်တောင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ဖုန်းထဲကအသံကိုနားထောင်ရင်းသိပါတယ်အနော်ရယ်) ဘားအံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမော်ကျူးရီသို့ရောက်ပီးလိုအပ်တာများပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကာ သူနေတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းလေးဆီပြန်လည်ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပီးတိုးတိုးလေးဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် နော်ဝါးလေးတယောက် နောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ရင်စစ်မက်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာ ပြည့်စုံသောဘဝလေးနှင့်လူသက်တမ်းစေ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း😥😥😥😥😪😪😪 မနော်ဝါး(18-နှစ်) ကောင်းသောဘုံဘဝတွင်ရောက်ရှိခံစားနိုင်ပါစေ။ ဒီနေ့တော့ နောက်ထပ် …
မြန်မာဂုဏ်ဆောင် လက်ဝှေ့အားကစားသမားအောင်လအန်ဆန်းကတော့ လက်ဝှေ့ အားကစားနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖို့ စတင်ခဲ့ချိန်မှာ ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ပတ်သတ်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အောင်လန်အန်ဆန်းကတော့ ” ကျွန်တော် လက်ဝှေ့ အားကစားကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ စတင်ခဲ့တဲ့ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ငွေရေးကြေးရေး နဲ့ပတ်သတ်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အရာရာ အဆင်ပြေဖို့ ဆယ်စုနှစ်တခု ကြာ အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် …
by Admins March 7, 2020 March 7, 2020
ဗစ်တိုးရီးယားမိသားစုပါ ၆ ဦးကို ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးက ဖွင့်သည့်အမှု ရဲပိတ်သိမ်းနေပြည်တော်မှ နာမည်ကျော် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွင် မိန်းကလေး၏ဖခင်နှင့် ရှေ့နေများအပါအဝင် ၆ ဦးကို ကလေးငယ်တက်ခဲ့သည့် မူကြိုကျောင်း၏ ကြီးကြပ်ရေးမှူးက ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် ဖွင့်ထားသည့်အမှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ပိတ်သိမ်းလိုက်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မူလကစွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီး ပြန်လွတ်လာခဲ့သူ ကိုအောင်ကြီး၏ ရှေ့နေ …
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဒီလိုတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီလားဘုရားပေါ်တောင် မရှောင်
by Admins March 7, 2020
မြန်မာလို့တောင် ခေါ်လို့ ရပါတော့မလားဗျာ။ ဒီလောက်ထိ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်နဲ့ ဘုရားရှေ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ၊ ဘုရားက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်း ဒါမျိုးကို တားမြစ်သင့်ပါတယ်။ လူကြီးသူမတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ လာနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ဒီလို ပို့စ်မျိုးပေးတယ်ဆိုတာ အရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ရေကူးကန်ပါတီတို့၊ ကလပ်တို့မှာ ဝတ်တာ …
Myanmar’s Pride ဆုကြီးကို မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်အဖြစ် ရရှိခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ
by Admins March 6, 2020 March 6, 2020
မတ်လ(၅)ရက်နေ့ညနေမှာ Lotte ဟော်တယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နယ်ပယ်အသီးသီးကထူးချွန်သူတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဆုချီးမြှင့်တဲ့ Myanmar’s Pride Awards ဆုပေးပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကြီးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်အားကစားမယ်လေးသက်ထားသူဇာကတော့ “Beat in sport Award”ဆုကြီးကို ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သက်ထားသူဇာကတော့ လတ်တလောမှာ …
by Admins March 5, 2020
နေပြည်တော်က မူကြိုကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားလိင်အကြမ်းဖက်ခံရမှုမှာ သံသယတရားခံအဖြစ်တရား စွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့ အောင်ကြီးရဲ့ နစ်နာမှုအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ အောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေတွေဘက်ကသိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တရားစွဲဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပြင်ဆင်နေပြီး မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ အောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ပြောပါတယ်။ “ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေရတဲ့ ကဏ္ဍက (၃)ခုပေါ့နော်။ ကလေးသူငယ်ဥပဒေအရ ကလေးနဲ့ မိဘတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲဖို့၊ နောက်တစ်ခုက …
လူမဆန်တဲ့ ချစ်သူကြောင့် မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ ၀မ်းနည်းစွာငိုရင်း သတိလစ် လဲကျခဲ့ရတဲ့သတို့သမီးလေး(ရုပ်သံ)
by Admins March 2, 2020
တော်တော်လူမဆန်တဲ့ ကောင်ပါ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်မလာပါဘူး ကောင်မလေးက တစ်ရှက်ကနေ နှစ်ရှက်ပါ သူနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝန်လည်း သုံးလေးလရှိနေပါပြီ တာဝန်မယူချင်ရင် အစတည်းက မလုပ်နဲ့လေ အခုကျသူရောက်မလာတော့ သတို့သမီးခမျာ ငိုလွန်းလို့ သတိလစ်တဲ့အထိပါဖြစ်သွားတာပါ ဒီလိုကောင်မျိုးကြောင့် ဖြူးမြို့သိက္ခာကျပါတယ် ဖြူးမြို့ ဆေးရုံ 4လမ်းနေ (ဦးစိန်အေး)+ဒေါ်စန်းဝင်း၏သား စည်သူခေါ် စည်သူအောင်ပါ အများသ်ိအောင် …
စာမေးပွဲဖြေကာနီးမှာ ထီ သိန်းတစ်ထောင် ကံထူးသွားတဲ့ (၁၀)တန်းကျောင်းသူလေး
by Admins March 1, 2020 March 2, 2020
ပခုက္ကူကိုင်းရွာကဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးမခင်သန္တာထွန်း ၁၃ ကြိမ်ျေမာက် သိန်း1000ကံထူးရှင်ျဖစ္ပါတယ်ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကိုလဲဂုဏ်ထူးများစွာဖြင့်အောင်မြင်ပါစေ။ရွှေတန့်တစ် သရက္ခန် ဘုရားကဒေါ်မာမာမြင့် မိုးယံရွှေလမင်းနှင့်မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်ကဆွတ်ခူးပေးလိုက်ပါပြီနော်။ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။နောက်လဲ ဆုကြီးများစွာကို ဆွတ်ခူးအောင်ရောင်းချနိုင်ပါစေ။ ၁၃ ကြိမ်ျေမာက် အောင္ဘာလေထီ ဖြင့္ပြဲ ထီဆုစာရင်းမ်ား သိန်း ၁၅၀၀၀. ဠ ၂၇၇၄၆၅. သိန်း ၁၀၀၀၀. ဠ ၁၀၆၈၉၆. မိုးယံ သိန်း …